အဘယ်အရာကိုဟောင်ကောင် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ဟောင်ကောင်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ဟောင်ကောင် ဒါဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့နေရာတစ်ခု၊ ကြွယ်ဝတယ်၊ gener ည့်သည်နဲ့ရက်ရောတယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ ဒီမြို့ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သွားသင့်သည်၊ ပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ ဘယ်တော့မှပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ
ဒီနေ့ငါတို့ဟောင်ကောင်ကိုသွားပြီးမယုံနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ဝံ့တော့မယ် ဟောင်ကောင်မှာတွေ့နိုင်မယ့်အရာတွေ ပထမ ဦး ဆုံးအလည်အပတ်ခရီးအဘို့အလမ်းပြအဖြစ်အတိုချုပ်စာရင်းသို့ မင်းကိုဖိတ်ထားတယ်!
မြို့သည်နေအိမ်ဖြစ်သည် ကျွန်းပေါင်း ၂၆၀ တွင်လူ ဦး ရေခုနစ်သန်းရှိသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွင်းအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာများသည်တစ်ခုတည်းသောဒေသမဟုတ်ပါ၊ အနီးအနားရှိမကာအိုသည်အခြားဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အထူးသီးသန့်ဥပဒေများနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များဖြစ်ပြီးကွန်မြူနစ်များမဟုတ်ပါ။
ဟောင်ကောင်ဖြစ်ရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်aဟောင်ကောင်ကျွန်း၊ ကလိုလွန်းနှင့်နယ်မြေသစ်များပါဝင်သည်။ ဤဒေသတစ်ခုလုံးသည်သမိုင်းတွင်စွာကြွယ်ဝပြီးဘိန်းစစ်ပွဲများအပြီး ၁၉ ရာစုတွင်ဗြိတိသျှအင်ပါယာကသိမ်းယူသည်အထိတရုတ်လက်၌အမြဲရှိနေခဲ့သည်။ မင်းသမိုင်းကိုကြိုက်ရင်၊ ဒီစစ်ပွဲတွေအကြောင်းဖတ်သင့်တယ်။ အမှန်တရားကတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ဟောင်ကောင်ဟာဗြိတိသျှလက်ထဲရောက်သွားတာကြာပြီ။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၄၀ ကျော်ပါက၊ 1997 ခုနှစ်တွင်ဟောင်ကောင်တရုတ်လက်သို့ပြန်သွား၏။ ဒီကနေ့သတင်းတွေမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ ချီတက်ပွဲတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဒီမိုကရေစီပိုမိုရရှိစေရေးတောင်းဆိုမှုတွေနဲ့အခြားသူတွေကဒီအခြေအနေကနေဆင်းသက်လာတယ်။
ဟောင်ကောင်၏မြေပြင်အနေအထား ဒီဟာကတောင်ကုန်းထူထပ်ပါသလား ဒီတော့သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းသာမြို့ပြဖြစ်ပါတယ်။ ရှိပါတယ် အများအပြားသိုက်နှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့်ရာသီဥတုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများနှင့်မုတ်သုန်ရာသီများနှင့်စိမ်းလန်းသောအပူပိုင်းဒေသဖြစ်သောကြောင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဒါကစူပါခရီးသွား ဦး တည်ရာဖြစ်ခြင်းမှတားဆီးမထားဘူး။
အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဤနေရာတွင်မြင်တွေ့ရမည့်အရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်ပထမခရီးစဉ်အတွက်ထိုနေရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများသည်ဟုတ်သည်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ရသည်။ အခြေခံသဘောအရ, ဗစ်တိုးရီးယားအမြင့်ဆုံး, တက္ကစီ, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်အတွက်တက်နိုင်ပါတယ်မြို့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်တောင်ကြီး ထရမ်အမြင့်ပိုပြီးပျော်စရာအရာဖြစ်သော။ The အမြင်များကိုကြီးဖြစ်ကြသည် မင်းရဲဝံ့ရင်မင်းလမ်းတောင်လျှောက်လာနိုင်တယ်။
၁၅ မိနစ်နှင့်မိနစ် ၂၀ အကြားတွင်လမ်းရထားသည်နံနက် ၇ နာရီမှည ၁၀ နာရီအထိဖြစ်သည်။ အထက် မျှော်စင်ထိပ် တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိနံနက် ၁၀ နာရီမှည ၁၀ နာရီအထိနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၁၀ နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားသည်။ The က Sky Terrace တစ်ချိန်တည်းတွင်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း အဆိုပါလမ်းရထားဟောင်ကောင် $ 99 ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်, ထိုလမ်းရထားနှင့် Sky Terrace ပါဝင်သောဖြတ်သန်းကုန်ကျသည်။
ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကူးတို့စီးပါ အခြားမြို့၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောရှုခင်းအပြင်ဗစ်တိုးရီးယားဆိပ်ကမ်းကိုဖြတ်ကူးရန်အလျင်မြန်ဆုံးလမ်းဖြစ်သည်။ The စတားကူးတို့ ၁၀ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်ပြီးလမ်းလျှောက်သည်။ ၁၈၈၀ ခုနှစ်ကတည်းကအလုပ်လုပ်သည် ၎င်းကိုဖမ်းရန်အချိန်သည်ည ၈ နာရီတွင်နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထင်ရှားကျော်ကြားသော Symphony of Lights ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ Symphony of Lights သည်အလင်းနှင့်အသံပြသခြင်းဖြစ်သည် သောနေဝင်ချိန်မှာဗစ်တိုးရီးယားဆိပ်ကမ်း၏ Kowloon ဘက်မှာရာအရပျကိုကြာပါတယ်။ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတနှင့်အလင်းပြပွဲဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Tsim Sha Tsui ရှိ Eyebar တွင်သင်လောင်းလျှင်ပိုကောင်းသည်။
နောက်ထပ်ဟောင်ကောင်၏လူကြိုက်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Tian Tan ဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓကြီး။ ပိုလင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအထက် ၃၄ မီတာအကွာတွင်ရှိပြီးရုပ်ထုကြီးဖြစ်သည် Lantau ကျွန်းပေါ်မှာ။ Ngong Ping ကိုဖောက်ထွင်းပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြမ်းပြင်ကိုကြည့်ပြီးတောင်တန်းတွေမှာလှပတဲ့ ၃၆၀ ºမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရလို့ည့်သည်အလည်သွားလာရတာအရမ်းကောင်းတယ်။
သင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှစ်သက်ပါကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် ၁၀ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။ ၎င်းသည် Sha Tin တွင်ရှိပြီးလှေကားတွင်ရွှေဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များပါ ၀ င်ပြီးအဆင့် ၄၃၀ ပါရှိသည်။ နောက်ထပ်ဘုရားကျောင်းသည် Man Mo Temple, Sheung Wan ဟောလိဝုဒ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဝှက်ထားသောသို့မဟုတ်မအများကြီး။ ၎င်းသည်စာပေ၏ဘုရားသခင်နှင့်စစ်ပွဲ၏ဘုရားသခင်ထံအပ်နှံထားပြီးအလွန်ကြော့ရှင်းသောဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။
ပုံမှန်တရုတ်ရေကန်တစ်ခုကိုလိုချင်ပါသလား ထိုအခါသင်ကထဲမှာရှာပါ Wong Tai Sin ဘုရားကျောင်းအလွန်တဲကြီးများနှင့်လှပသောအတွင်းပိုင်းကန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဈေးဝယ်ချင်ပါသလား တရုတ်စျေးကွက်? သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဟောင်ကောင်ကိုချစ်လိမ့်မည်။ ပထမက ဘုရားကျောင်းလမ်းညစျေး ၎င်း၏စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အတူလတ်ဆတ်သောငါးနှင့်ပင်လယ်စာပျော်မွေ့ရန်။
ထိုအခါသင်သည်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်စျေးဝယ်နိုင်ပါတယ် အမျိုးသမီးစျေးကွက် အရာအားလုံးကိုရောင်းချတဲ့တစ်ရာထက်ပိုတင်းကုပ်နှင့်အတူ ကျောက်စိမ်းစျေး ပုလဲနှင့်ကျောက်စိမ်းနှင့်အတူ Calle က de los Gatos အပေါ်စျေးကွက် ၎င်း၏သိချင်စိတ်နှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ခန်းများနှင့်အတူ။ ငါတို့သည်လမ်း၌ရှောက်သွားနိုင်၏ နေသန်လမ်း Tsim Sha Tui ကမ်းခြေကို Sham Po နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသော Kowloon ၏ကျောရိုးကဲ့သို့ရွှေမိုင်းသို့မဟုတ်။ သုံးကီလိုမီတာကျော်အနည်းငယ်သာ ဘုရားကျောင်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စျေးဆိုင် ...
ဟောင်ကောင်သည်မြို့ကြီးတစ်မြို့လည်းဖြစ်သည် ညဘဝ။ အခြားအာရှမြို့ကြီးများတွင်ညသည်မကြာမီတွင်အဆုံးသတ်သွားသော်လည်းဤတွင်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ညမှာပျော်မွေ့သည် Lan Kwai Fongတရာကျော်နှင့်အတူဗဟိုခရိုင်အတွင်းရှိလမ်းကွန်ယက် ဘား, ဒစ္စကိုနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ။ ကြော့ရှင်းသောစတိုင်လ်ဖြင့်နေရာတစ်ခုရှာဖွေနေပါသလား။ ထိုအခါသင်သည်တက်သွားနိုင်ပါတယ် ၁၁၈ ထပ်တွင်ရှိသောဘားတန်းအိုဇုန်း ဟောင်ကောင် Ritz-Carlton ၏။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပျောက်ခြင်း၊ လမ်းနည်းနည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းများကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်လူအုပ်နောက်လိုက်ခြင်းတို့ကိုနှစ်သက်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ခရီးစဉ်ကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် ဟောင်ကောင်စက်လှေကား, ဗဟိုမှအလယ်အလတ်အဆင့်အထိနာမည်ကြီးခရီးစဉ်။ အကြောင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ကြာဆုံးပြင်ပစက်လှေကားတစ်ချိန်တည်းတွင်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ရာဆီသို့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနောက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သောကြီးမားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်။
ဒီစနစ်ကဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာစျေးဆိုင်တွေ၊ ရပ်ကွက်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခုန်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါမေ့လျော့မည်မဟုတ် ဒစ္စနေးဟောင်ကောင် သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာပန်းခြံသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနေရာများမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုနှစ်သက်သောသူများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဟောင်ကောင်တွင်ဤပျော်စရာနေရာများရှိသည်ကိုလည်းသတိပြုပါ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါအနည်းငယ်ပိုသောနေရာ၏ပုံမှန်စူးစမ်းဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့။ အဲဒီအတွက် ငါ Lamma ကျွန်းသို့မိနစ် 20 ကူးတို့ယူရန်အကြံပြုပါသည် ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များနှင့်သာယာသောရာသီဥတုရှိသည်။ သင်ဒီမှာပျော်ရွင်စရာကောင်းသောဥပမာတစ်ခု၊ စျေးဆိုင်, လမ်းများနှင့်ကမ်းခြေ။ တဖန်သင်တို့တစ်နေ့လုံးရှိပါက တစ်ရက်ခရီးစဉ်၊ မကာအိုကိုသွားပါ ငှက်နှစ်ကောင်ကိုကျောက်တုံးတုံးဖြင့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။
မြို့ မကာအို၎င်း၏လောင်းကစားရုံနှင့်၎င်း၏အတူ ပေါ်တူဂီလေ၎င်းသည်ကူးတို့မှတစ်နာရီကြာပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုတို့ဟာငါနဲ့အတူလက်ချင်းချိတ်နေတယ်။ ကြည့်ရ၊ လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ရင်ပြင်တွေ၊ ပြတိုက်တွေ၊ အနုပညာပြခန်းတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟောင်ကောင်မှာမြင်ရမယ့်အရာတိုတိုတုတ်တုတ်ဟာပထမဆုံးခရီးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဟောင်ကောင် » ဘာဟောင်ကောင်မှာကြည့်မလဲ